DAAWO-Xildhibaano Katirsan Puntland oo Ka Nixiyey Beelihii Kordhinta Doonayey,”Lama Kordhin Karo Candhuuftiina Liqa”.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey warar sheegaya inuu socdo qorshe ay saxiixeen xildhibaano katirsan barlamaanka Puntland ayna ku dalbanayeen in dib loo furo dastuurka Puntland isla markaana la kordhiyo tirada barlamaanka.
Wararkaan ayaa sheegaya in xildhibaano ku dhow 30 mudane ay saxiixeen mooshin ay ku doonayaan in la furo dastuurka isla markaana la kordhiyo tirada mudanayaasha barlamaanka Puntland si ay xubno u helaan qaar kamid ah beelaha Puntland.
Siyaasiyiinta qaar ayaa ku doodaya in qorshahaan ay dabada ka riixayso madaxtooyada Puntland kadib markii uu horay u fashilmay qorshe beesha Tanade ay ku doonaysay in lagu kordhiyo barlamaanka Puntland lagana siiyo xubno ka badan kuwa ay hadda qabaan.
Xildhibaano katirsan barlamaanka Puntland oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garoowe ayaa ka horyimid mooshinkaasi oo ay sheegeen inuusan dastuuri ahayn isla markaana aysan barlamaanku furi karin dastuurka Puntland.
Xildhibaanadaan ayaa ka horyimid guud ahaan rajooyinka ay qaben qaar kamid ah beelaha Puntland oo aan xildhibaano helin tan iyo aasaaskii Puntland ee sanadkii 1992-dii.